Kusolwa eyomsebenzi eshiswa nendlu - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa eyomsebenzi eshiswa nendlu
Kusolwa eyomsebenzi eshiswa nendlu
Ozakwabo bebekhala ngemali ye-UIF
SISHE sangqongqa isidumbu sikaMnu Dumisani Ndwandwe, obesebenza efemini ekhiqiza iziqandisi eMandeni.
KUSOLWA ukungqubuzana phakathi kwezisebenzi nomqashi mayela nokuthungelwa ngomlilo, kubulawe owesilisa elele endlini abehlala kuyona KwaHlomendlini, eMandeni, ngoMsombuluko ebusuku. UMnu Dumisani Ndwandwe (34) obulawe ngabantu abangaziwa ubesebenzela ifemu eyakha iziqandisi KwaSithebe, khona eMandeni, kanti kuthiwa emasontweni amabili adlule kwaqubuka umsindo, izisebenzi zibuza abaqashi ukuthi kungani zingakhokhelwa imali ye-UIF, okwakufanele ziyithole emuva kokuhlasela kweCovid-19. Omunye umthombo okhulume neLANGA, uveze ukuthi kuke kwaba nokuhilizisana phakathi kwezisebenzi nomufi.
“UMnu Ndwandwe ubesebenza ehhovisi elengamele ezezisebenzi (human resources), engumabhalane, kunguye ogcwalisa izinto ezini ngi ezingenayo. “Kunozakwethu abaya kuye amasontweni amabili edlule, kade bebuya ehhovisi lomnyango wezezisebenzi KwaDukuza, lapho batshelwa khona ukuthi kawekho amaphepha afakwa yile nkampani ukudlulisa isicelo sokukhokhelwa imali ye-UIF. “Babuyela kuyena (uMnu Ndwandwe) beyobuza ukuthi kwenzekani, kwazise sasesitsheliwe ukuthi zizokwehla izinsuku zethu zo kusebenza,”kusho lo mthombo osebenza kuyona le nkampani. Uqhube wathi uMnu Ndwandwe waqinisekisa ukuthi amaphepha asenziwe, okwathi uma izisebenzi zabuyela ehhovisi lo mnyango wezezisebenzi, zatshelwa ukuthi ngempela asefakiwe.
“Kwaqala izinkinga uma sesilandelelela ehhovini eliseThekwini, okwakumele izinto zethu ziye kulona. Satshelwa ukuthi kawekho amaphepha afakiwe. “Kukhona ababuyele kuMnu Ndwadwe, wabatshela emakhaleni ukuthi yena ukhathele, unomsebenzi omningi awenzayo. Lokho kakwehlanga kahle kithina siyizisebenzi, kodwa lokho kakusho ukuthi besekufanele abulawe,” kusho umthombo.
Uthi nabo beyizibsebenzi ba thukile uma befika emsebenzini ngoLwesibili, betshelwa ngabanikazi benkampani ukuthi kakusetshenzwa ngoba kunesisebenzi esishonile.
Imizamo yeLANGA yokuthola umndeni kamufi iphunzile njengoba kuthiwe ubengahlali nawo. Okuthiwa ukhulumela izisebenzi kule nkampani igama lakhe ligodliwe ngenxa yengebhe kwazise udaba lubucayi uthe akakwazi ukukhuluma naleli phephandaba ocingweni ngoba udaba lubucayi kakhulu njengoba sekukhona noshonile. Imizamo yokuthola izikhulu zale nkampani iphunzile njengoba nayizolo ngoLwesithathu bekungasetshenzwa kuyona. Izisebenzi zakhona zithi zithole imiyalezo ebeyizibizela emsebenzini ngoLwesithathu ekuseni. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uLt Col Nqobile Gwala, uqinisekisile ukuthi kushiswe owesilisa endlini abehlala kuyona, amaphoyisa avule icala lokubulala, akukaboshwa muntu.
Previous articleUxhaswe ngemishini ebiza u-R2m
Next articleU-principal “ubhadanywe edlwengula umfundi”